'ओलीलाई मत दिनु भनेको अर्काे बन्दुक हातमा थमाउनु हो' 'ओलीलाई मत दिनु भनेको अर्काे बन्दुक हातमा थमाउनु हो' Canada Nepal
मोनीका सिंह बैशाख २३ २०७८
कसले फुटाउँदैछ एमाले र जसपा ?
काठमाडौं । नेपालले हरेक व्यवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता झेलिरहेको छ । गणतन्त्रमा आइपुुग्दा पनि दलका नेताहरु एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप गरेर राजनीति अस्थिरतालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
दलहरु विभाजनपछि फेरि एकता हुन्छन््, तर फेरि फुटिहाल्ने अवस्थामा पुग्छन् । यसो हुनुमा कतिपयले बाह्य शक्तिको चलखेललाई कारक मान्छन् । मुलुक र जनताको भविष्य बनाउन प्रण गरेर हिँडेका राजनीतिक दलका नेताहरु बाह्य शक्तिको चलखेल नबुझ्ने र बुझेर पनि स्वीकार गरेका हुन् भन्ने उनीहरु दोषी हुन् । तर, आन्तरिक रुपमा दलहरु कमजोर हुने र अन्तर दलले अर्काे पार्टी फुटाउन खेल्न भूमिका नै मुलुकको अस्थिर राजनीतिको कारक मान्न सकिन्छ ।
संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान बमोजिम राज्यको पुनर्संचना भएपछि राजनीतिक स्थिरतासहित मुलुकको विकास र समृद्धि हुने बताएका नेताहरु आपसमा बाझबाझ मात्रै गरेका छैनन्, दलहरु विभाजनको अवस्थामा पनि पुुगेका छन् ।
दुई तिहाइ नजिक बुहमत ल्याएको नेकपा हुँदै एमाले विभाजनको अवस्थामा आइपुगेको छ । डेढ दशक पार्टीको नेतृत्व गरेका माधवकुमार नेपाल अहिले एमाले त्याग्न पनि पछि नपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । मधेशबाट प्रतिनिधित्व गरेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीसहितका दलका नेताहरुले मधेश र मधेशी जनताको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै मधेशवादी दलका रुपमा पार्टीहरु गठन भए । यी पार्टीहरु काँक्रो चिरा परेजस्ता टुक्रा टुक्रा भए । तर, २०७७ को सुरुवाती समयमा एक ढिक्का भएका उनीहरु एक वर्षमै आ–आफ्नो बाटो लाग्न तयार भएका छन् ।
आफ्नो प्रतिबद्धता, योजना र रणनीति भुलेर नेताहरु पार्टी फुटाउन किन अग्रसर हुन्छन् ? पार्टी फुटाउँदा देश र जनताप्रति कसरी हितकर हुन्छ ? कि नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थले बढी काम गर्छ ? धेरैले नेताहरुको सत्ता मोह र पदलोलुपताका कारण पार्टीहरु विभाजन हुने गरेको आरोप लगाउँछन् ।
मुलुक कोरोनाभाइरस संक्रमणको चपेटामा छ । जनता उपचारको अभावमा ज्यान गुमाएका छन् । तर, देश र जनताको अभिभावक मानिएका दल र तिनका नेताहरु सत्ता र शक्तिका लागि लडिरहेका छन् । उनीहरु आपसमा भिडेका छन् र टुक्रने अवस्थामा पुुगेका छन् ।
कसले एमाले फुटाउँदै छ ?
विघटित प्रतिनिधिसभाको पहिलो दलको रुपमा रहेको एमाले अहिले विभाजनको अवस्थामा छ । एमालेबाट तीन जना माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओलीले सरकारकोसमेत नेतृत्व गरेका छन् । तर, उनीहरुकै पार्टी अहिले विभाजनको अवस्थामा आइपुगेको हो । अहिले ओलीको नेतृत्वमा एमाले छ । माधव नेपाल र झलनाथले पनि एमालेको नेतृत्व गरिसकेका छन् । तीन तीन जना पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरिसकेका नेताहरुले लिड गरेको एमाले अहिले किन विभाजनको अवस्थामा आइपुग्यो ? यहाँ पार्टीको चिन्ताभन्दा पनि आफ्नो शक्ति सञ्चयको पिरले काम गरेको देखिन्छ ।
संवत् २०७१ मा काठमाडौंमा आयोजित नवौँ महाधिवेशनले माधवकुमार नेपाललाई हराएर ओलीलाई एमालेको नेतृत्व गर्न जिम्मा दियो । पछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर गठन भएको नेकपा र नेकपाले नेतृत्व गरेको सरकारको नेतृत्व पनि ओलीलाई नै दियो । तर, बीचमै माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीविरुद्ध चलखेल गर्न थालेपछि मुलुकको राजनीति नै अस्थिरतामा धकेलियो । घर झगडा झाँगिएपछि एमालेभित्र अरु शक्तिहरुको प्रवेश हुन पुग्यो । पछि गत फागुन २३ गतेको सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतायो ।
तर, प्रचण्ड समूहमा रहेर ओलीविरुद्ध चलखेल गरेका माधव नेपाल एमाले फर्कन चाहेनन् वा वातावरण पाएनन्, यो उनीहरु नै जानून । तर, एमाले एक ढिक्का हुन भने सकेन । संसदको ठूलो दल एमाले विभाजनको चाह प्रचण्डले समेत राखेको आरोप लाग्यो । उनले माधव नेपाललाईसमेत उकासेको आरोप लागेको छ । भलै प्रचण्डले यसलाई बारम्बार खण्डन गर्दै आएका छन् ।
जेठ ७ गते संविधानको धारा ७६(५)अनुुसार सरकार गठन प्रक्रियामा आइपुग्दा एमालेलाई विभाजन गराउने कार्यमा कांग्रेसको पनि भूमिका देखियो । दलीय अनुशासन र चरित्रलाई भूलेर चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र लामो समयदेखि कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै आएका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेको नेपाल समूहको हस्ताक्षर बोकेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गरे ।
यसले पनि एमालेलाई एकताभन्दा विभाजनलाई सहजता गर्न भूमिका खेल्यो । एमालेलाई विभाजनको बाटोमा लैजानेमा नेतृत्वको हिसावले ओली प्रमुख कारक हुन् भने त्यसपछि माधवकुमार नेपाल हुन् । प्रचण्ड र देउवा पनि एमाले फुटाउने कार्यमा लागेको आरोप छँदैछ, थोरै जोडिन्छ, जसपा पनि ।
को हो जसपा फुटाउन खोज्ने ?
विघटित प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल एमाले विभाजनको अवस्थामा रहेका बेला चौथो दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) पनि उही हविगतमा छ । जसपा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव समूहमा विभाजित भएको छ । अब उनीहरु पार्टी नै अलग गर्ने अवस्थामा पुुगेका छन् । कार्यकारिणी समितिमा अल्पमतमा परेका महन्थ र राजेन्द्र महतो राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ब्यूँताउने तयारीमा रहेको चर्चा छ । जसपा फुटाउन पनि आन्तरिक र बाह्य दलहरुको भूमिका देखिन्छ ।
‘आफ्नो थैलीको मुख बन्द गर्नु, अरुलाई चोर दोष नलगाउनु’ उखान नेपाली समाजमा छ । यसर्थ आफ्नो पार्टीको एकता जोगाउने पहिलो कर्तव्य र दायित्व स्वयं नेताहरुको हो । तर, जसपा पनि आफ्नै नेताहरुसँग अरु पार्टीको पनि चलखेल देखिन्छ । विशेष गरी जसपा फुटाउन प्रमुख राजनीतिक दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको भूमिका देखिन्छ । एमालेको ओली समूहले महन्थ र राजेन्द्रलाई बोकेर आफ्नो स्वार्थअनुसार कार्य गराइरहेका छन् भने उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई समूहलाई भने एमालेकै माधव नेपाल समूह, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रयोग गरिरहेका छन् । जसपालाई एक हुन नदिने गरी ओली समूहले उसका सांसदहरुलाई रिसोर्टसम्म पुर्‍याएको घटना सार्वजनिक भयो ।
उता माओवादीका प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति देउवा र एमालेका माधवकुमारले दलीय अनुशासन र संसदीय पद्धति र आचरण विपरीत उपेन्द्र–बाबुराम समूहको हस्ताक्षर बोकेर सरकारको दाबी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेका थिए ।
विशेषरी दलहरु सरकार गिराउन र बनाउन गुटहरु खडा गर्ने र एक अर्काविरुद्ध लाग्ने चरित्र देखाउँदै आएका छन् । सत्ता र शक्तिमा रहन नेताहरु राजनीतिक नैतिकता र आचारण देखाउनबाट पछि हट्छन् । उनीहरु सत्तामा जानका लागि आफ्नो र अरु पार्टी फुटाउन पनि हिच्किचाउँदैनन् । जसको शिकार आम जनता हुँदै आएका छन् । मुलुक लामो समय द्वन्द्व र संक्रमणकालबाट गुज्रियो ।
नेताहरुले राजतन्त्र फ्यालेर गणतन्त्र आएसँगै संविधान सभाबाट जारी हुने संविधानले राजनीतिक स्थिरता र मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास दिलाए । तर, ती विश्वास र भरोसामा आगो लगाएर दलका नेताहरु आरोप–प्रत्यारोप उत्रिने र आफ्नो स्वार्थमा फुटाउने र जुटाउने काम गर्दै आइरहेका छन् । अझै नेपाली जनताले यो हविगत कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने हो, अहिले नै भन्न सकिँदैन ।
जेठ १४, २०७८ शुक्रवार १३:४५:०३ बजे : प्रकाशित
प्रधानमन्त्री केपी ओली जालझेल गर्न मात्र चतूर छन् (भिडियो)
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जालझेल गरेर राजनीति गर्न मात्र चतूर रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
क्यानडा नेपालसंग कुराकानी गर्दै नेता थापाले भने, "प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बलियो र चतूर नेता भन्दा हाँस उठ्छ । नेकपा जस्तो ठूलो दलको अध्यक्ष भएका, संसदमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति अहिले न नेकपा पार्टी एकीकरण गर्न सके न नै विश्वासको मत लिन सके न नै एमाले पार्टीलाई नै जोगाउन सके । प्रधानमन्त्री ओली जालझेल गरेर आफ्नो कुर्सी जोगाउन मात्र चतूर छन् जुन देशको लागि हानिकारक छ ।"
नेता थापाले संसद विघटन हुनुको कारण एमसीसी रहेको टिप्पणी गलत रहेको जनाएका छन् । गगन थापाले भने, "अहिले संसद विघटन हुनुको कारण प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी भित्रको झगडा हो । अरु भनेको गरिने टिप्पणी मात्र हो । तत्कालीन नेकपा र अहिलेको एमालेका शिर्ष नेताहरु बीच पद र कुर्सीको लागि गरिएको झगडाले संसदमाथी आक्रमण भएको हो ।"
गगन थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको नियत ठिक नभएको कारण चुनाव गराउन सक्दैनन् । विगत एक महिनादेखि प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलापले नै बताउँछ कि चुनाव गराउने नियत नरहेको नेता गगन थापाको विश्लेषण रहेको छ ।
जेठ १५, २०७८ शनिवार २२:०३:०८ बजे : प्रकाशित